WordPress Kuchengeta Rondedzero: Yekupedzisira Rondedzero yeMazano, Zvishandiso, uye Zvakanakisa Maitiro | Martech Zone
Chishanu, July 20, 2018 Mugovera, October 24, 2020 Douglas Karr
Nhasi chaiye ndanga ndichisangana nevaviri vedu vatengi nezve yavo yekuisa WordPress. Ndiri akanaka mutengesi-agnostic nezve zvemukati manejimendi masisitimu. Kuzivikanwa kweWordPress kwakanyatsobatsira sezvo vazhinji vechitatu-mapato vachabatana nayo, uye madingindira uye plugin ecosystem yakanaka sezvaungawana. Ndakagadzira akati wandei WordPress plugins, ini pachangu, kubatsira vatengi vedu uye kutsigira ecosystem.
Izvo zvakati, haina pasina nyaya dzayo, zvakadaro. Nekuti inozivikanwa zvakadaro zvemukati manejimendi system, WordPress chinonyanya kukosha chevabambi uye spammers kwese kwese. Uye, nekuda kwekureruka kwekushandisa, zviri nyore kwazvo kuvaka iyo yakavharika kumisikidza iyo inokonzeresa kuti saiti zigaye kumira. Nekuita kuri kutsoropodza mazuva ano pakushandisika uye nekutsvaga kwekutsvaga, izvi hazviratidzi nzvimbo dzakanaka zhinji.
Izvo zvakati, zvakanaka kuti kune vanhu vakaita saBigrockCoupon vakagadzira yakazara infographics kubatsira WordPress vatongi. Ivo infographic, WordPress Webhusaiti Yekuchengetedza Yekutarisa, ine anopfuura makumi mashanu akakosha matipi uye maitiro kune varidzi vewebhusaiti kuronga mune yavo yekufambisa kufambisa nyaya.
Heino Yangu WordPress Yekuchengetedza Rondedzero
Iyo infographic ine zvimwe zvinhu zvishoma, asi kana iwe ukavhara izvi iwe uri kumberi kune vako vanokwikwidza! Ini zvakare ndinochengetedza rondedzero yeiyo zvakanakisisa WordPress plugins izvo zvatakayedza uye tikazvishandisa… ita chokwadi chekumaka!
Backup Yako WordPress Dhatabhesi - Usati waita chero chinhu neWordPress, ita shuwa kuti iwe une mabepu makuru anochengeterwa kure. Ichi chikonzero nei tichishandisa WordPress Managed Hosting ne Flywheel. Ivo vane otomatiki uye eruoko backups ne-bhatani rinodzosera. Hatina kumbofanirwa kumisikidza kana kugonesa chero chinhu… ivo vaigara varipo!
Ipa WordPress kuongorora - Mhanya yako saiti kuburikidza WP Kuongorora uye iwe unowana tani yezvinhu yekuchenesa neako saiti. Haisi nyaya dzese dziri kuzokukanganisa zvakanyanya - asi zvese zvishoma optimization kuverenga!
Webhusaiti Yekumhanyisa Audit - Shandisa Google's PageSpeed ​​Insights kuongorora mapeji ezvekukurumidza nyaya.
Tarisa uone Broken Links - Sezvo ndashandisa maturusi akati wandei epamhepo, ini handina kumbowana chero chinhu chiri nani kupfuura Kupopota Frog SEO Spider yenzvimbo dzinokambaira dzezvinhu zvakaputsika zvinongedzo. Iyo infographic inokurudzira kuwedzera plugin kuti uite izvi, asi izvo zvinogona kudzikisira mashandiro ako uye kukuendesa mune imwe nhamo neiye anokugamuchira.
301 Dzorera kune Broken Links - Kunze kwevatengi vedu vakaitirwa ne WPEngine, iyo ine yayo redirection manejimendi, ese edu vatengi vanomhanya iyo Redirection plugin.
Simudzira WordPress, Themes, uye Mapulagini kune Yazvino Shanduro - Izvi zvinongokosha mazuva ano zvakapihwa nyaya dzekuchengetedza. Kana iwe uri mumwe weavo vanhu vari kunetseka kukwidziridza plugin inogona kutyora saiti yako, ungangoda kutsvaga plugin nyowani. Vagadziri vese vane mukana wekuyedza madingindira avo nema plugins pane anouya eWordPress kuburitswa.
Delete Spam Comments - Ndingakurudzira zvikuru kuwana Jetpack uye kunyorera kuAkismet kubatsira neizvi.
Bvisa Matimu Asingashandiswe, Mifananidzo, uye Anoshanda, Mapepa asingashandiswi - Akagadziriswa plugins anowedzera imwe kodhi kune yako saiti kana uchitsikisa. Iyo yepamusoro inogona kunyatsononoka yako saiti saka yako yakanakisa nzira ndeyekuita pasina.
Bvisa Zvinyorwa uye Tsvina - Iyo diki dhatabhesi yako, inomhanyisa iyo mibvunzo yekudhonza zvemukati. Ive neshuwa yekuchenesa peji uye kutumira zvinyorwa pamwe nemapeji akabviswa uye zvinyorwa nguva dzose.
Kuchengetedzwa kweWebhusaiti - Flywheel Isu hatisi makuru mafeni ezvekuchengetedza plugins, ini ndaikurudzira kuenda neyakagamuchirwa mukuru panzvimbo. Chikwata chavo chinogara pamusoro pekuchengetedzeka pasina kuita kwepamusoro kweplagin.
Gadzirira Dhatabhesi Matafura - Kana iwe wakaisa akati wandei madingindira uye plugins, mazhinji acho anosiya dhata kumashure mudhatabhesi yako. Izvi zvinogona kuwedzera kune zvinoitwa nyaya uye kuwedzera mutoro nguva sezvo isina kushandiswa data ingave ichiri kubvunzwa uye kutakurwa kunyangwe ichionekwa kana kwete. Iyo plugin yakanyorwa ndeyechinyakare, ini ndinokurudzira Yepamberi Dhatabhesi Dhivha.
Mifananidzo Kugadziridza - Mifananidzo isina kumanikidzwa inogona kukanganisa kushanda kwewebsite yako. Tinoda Kraken uye iyo WordPress plugin yekumanikidza mifananidzo yedu.
Tarisa Email Sarudza-mukati uye MaFomu Ekubata Anoshanda - giravhiti Forms Isu takambowana chichemo kubva kune anotarisira mutengi kuti saiti yavo ichangobva kuvhurwa yaive nemafomu asi ivo vasina kugamuchira chero kutungamira. Patakatarisa saiti iyi, takaona kuti mafomu aive mafomu ehumwe uye chero munhu angave akabata kambani akaendesa asi iyo data haina kwayakaenda. Zvinorwadza! Isu tinoishandisa neYENYU mutengi!
Ongorora Google Analytics - Zvinogara zvichishamisa kune vatengi vedu kuti mashoma emapeji avo akanyatso nyorwa neinjini dzekutsvaga kana kutoverengwa nevashanyi. Tinonyanya kufarira Mushandisi Kuyerera, mushumo unoratidza mafambiro ari kuita vanhu kuburikidza newebsite yako.
Tarisa Google Search Console - Analytics inongoratidzira iwe chete wakasvika panzvimbo yako. Ko zvakadii nezvevanhu vakaona yako saiti mune yekutsvaga injini mhedzisiro? Huye, maWebmasters chishandiso chekuona kuti Google inoona sei yako saiti yehutano, kugadzikana, uye mumhedzisiro yekutsvaga. Ramba uine ziso pane iyo data rekukanganisa uye edza kuzvigadzirisa pavanobuda.
Gadziridza Zvemukati Zvako - Mukunyora kweichi posvo, ini ndakagadzirisa dzinenge hafu yegumi nembiri zvinyorwa zvandakanga ndichirevera kuti ndione kuti dzakachengetedzwa kusvika pari zvino. Iwe unozoshamiswa nenyaya dziri pawebhusaiti yako dzinomuka - kunge zvinongedzo kune zvekunze nzvimbo izvo zvisisipo, mifananidzo inogona kunge iine matambudziko, uye zvingori zvechinyakare zvemukati. Chengetedza zvemukati zvitsva kuitira kuti zvigoverwa, zvakanyorwa, uye zvekukosha kune vateereri vako.
Wongorora Musoro & Meta Tsananguro tags - Nzira huru yekukwiridzira saiti yako yekutsvaga injini kuisa nekugadzirisa plugins. Mazita ekuremekedza anobatsira peji rako kuti rive rakarongedzwa zvakanaka kune izvo zvinyorwa zvarinoburitsa uye meta tsananguro zvinokwezva vashandisi veinjini yekutsvaga kuti vadzvike pane yako yekunyorwa mhedzisiro.
Heano akazara infographic ane anopfuura makumi mashanu matipi uye maitiro kubva BigrockCoupon!
Tags: 301 Dzorera kune Broken LinksBackup Yako WordPress DhatabhesiChinja Mapassword AkoTarisa Adsense Ads paWebhusaiti YakoTarisa Zvekubatana ZvinongedzoTarisa Email Sarudza-mukati uye MaFomu Ekubata AnoshandaTarisa uone Broken LinksTarisa Google Console (Webmaster) ZvishandisoTarisa Zvishandiso ZvakashandiswaTarisa Sidebar Links uye BlogrollsTarisa Zvemagariro Midhiya LinksTarisa Webhu Yekuverenga StatisticsTarisa Webhusaiti KuchengetekaTarisa Kwako Dhawunorodha ma LinksTarisa Saiti Yako SaitiTarisa Yako Saiti KufambisaBvisa MararaTsanangura Auto Chengetedza ChikamuDelete Spam CommentsBvisa Mapulagi AsingadiweBvisa Matimu AsingadiweDzvanya otomatiki WordPress KuwedzeredzaDzinga iyo Debug ModeDzima Trackbacks uye PingbacksMifananidzo KugadziridzaWedzera Chiganhuriro Chemurangariromalware kuongororaMedia Mafaira ChenesaGadzirira Dhatabhesi MatafuraKutumira KugadziriswaZorodza Musoro weBanner uye Saiti MifananidzoBvisa Zvinyorwa & Post DzokororoBvisa Vasingashande Webhusaiti VatongiVandudza Kubata & DomainsPindura MhinduroOngorora Google AnalyticsWongorora Meta zita & Meta tsananguro tagsWongorora pa-Peji-SEOWongorora Yako Pamusoro Pedu PejiMhanya Saiti Kuburikidza neWP KuongororaTora Mazuva ese BackupsKwayedza Bhurawuza & Chidimbu KuenderanaGadziridza zuva reKopiraiti mune Yako tsokaGadziridza Zvemukati ZvakoGadziridza Yako WordPress pluginsGadziridza Yako WordPress themeGadziridza Yako WordPress WidgetsSimudzira WordPress kune Yazvino ShanduroKugonesa Yako WebhusaitiWebhusaiti Kuchengetedza KuongororaWebhusaiti Yekumhanyisa Auditwp kuongorora